Su'aal dayuuradood classic
sano 2 2 bilood ka hor #570 by harrislarry1946
Salaan ................. ayaa Miyaad weligaa is samaynta DC8 download a ??
sano 2 2 bilood ka hor #571 by Gh0stRider203
hadda in uu noqon doono macaan. Waxaa jira dhowr ah oo halkaas, labada freeware iyo payware laakiin haa mid ka Rikoooo noqon lahayd fiican
sano 2 2 bilood ka hor #573 by harrislarry1946
Waxay noqon lahayd gaar ahaan u fiican haddii la sameeyay Idaacada ee ka shaqeeya.
Waxaan inta badan aan duulaya in FS2004 sameeyo xaaladaha IFR oo jecel version dabaal 757 laakiin
ma aad samayn kartaa raadiyaha in ay guriga ku VOR ama ILS ..... lottta wanaagsan ayuu falaa.
Haddii ay ka dhigi DC8 ah waxa uu noqon lahaa fiican u leedahay in version fidiyey.
sano 2 2 bilood ka hor #578 by Gh0stRider203
Waxaan u muuqdaan in ay sameeyaan xamuulka muddo dheer shixnad si aan kaliya samayn IFR on qaadataan-off / degtey HADDII AAN leeyihiin in ay. Waxaan aadan haysan waqti aad u fadhiisan ATC monitor ah. In aan ku xuso qaar ka mid ah duulimaadyada My aad habeen sameeyey iyo kinda waxan loo yaqaan sida hurdo oo hadda ka dibna waxaan ku raaxaysan lol
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.195